News - The Market Prospect of Welded Pipe Equipment Nnọọ sara mbara
Ngwongwo ọkpọkọ na-arụ ọrụ bụ ụlọ ọrụ na-adịte aka, mba na ndị mmadụ chọrọ ụlọ ọrụ dị otú ahụ! Na usoro nke mmepe mba, ọchịchọ maka ígwè na-arịwanye elu, ya mere, akụkụ nke ọkpọkọ ígwè na usoro mmepụta nke ígwè na-ebuwanye ibu. Pipe mmepụta nwere ike ejikari ga-kere abụọ edemede, otu bụ enweghị nkebi anwụrụ, tumadi emepụta site Rolling, extrusion na ịbịaru.
Kedu ihe bụ ezigbo nkọwa nke ụdị nke igwe anwụrụ anwụrụ, ndị ọrụ azụmaahịa a na-atụgharị anya, ndị na-azụ ahịa nwere echiche: njikọta nke njirimara, ọrụ na ikike mmepe nke atọ iji mejupụta ezigbo njirimara nke aha aha nke welded pipe. Ogo, bụ oghere nke ọmụmụ nke aha aha nke igwe ọkpọkọ welded. The elu àgwà nke welded anwụrụ unit ngwaahịa, ezi uche price na-echebara ọrụ bụ ihe dị mkpa iji merie ude nke ọkụ eletrik na otu.
Ogo nke ọkpọkọ welded bụ ntọala na ndụ nke njikwa. Ka akụ na ụba ụwa na-abanye n'oge mgbanwe ngwa ngwa, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọkpọkọ ọhụụ na-agba mbọ ịkwalite ngwaahịa ndị nkịtị na ngwaahịa ndị a na-agbanye ọkụ.
Igwe a na-agbanye ọkụ na-eme ka o kwe omume iji nnukwu ihe data data, si otú a na-akpali ngbanwe sayensị na ahịa, nke na-eme ka usoro ahịa ahịa niile nke welded pipe unit dị kpọmkwem.
Ogwe ndị a na-agbanye ọkụ na-atụle omume ahịa site na ịdabere ihe niile na nyocha data sayensị iji họrọ ọnụọgụ ndị ahịa nke ọma, kama itinye ego na-enweghị isi na enweghị uche na ịhapụ ndị ahịa na ndị ahịa dị ugbu a.
Nnyocha nlekọta nke igwe na-akpụ akpụ dịgasị dabere na ugboro ojiji, ọnọdụ gburugburu ebe obibi, wdg. (Lee Isiokwu 1). Isiokwu 1 na-egosi njirisi nlele ndozi. Nnyocha nlekọta mmezi ahụ bụ inyocha igwe ahụ site n'oge ruo n'oge ma nwee ihe oriri na ngwa ngwa ngwa ngwa iji hụ na arụ ọrụ na mmepụta.